ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူ - Phcoker
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0)
ထို့အပြင် MK677, MK677, MK677, နဲ့ L-0667, ...... အဖြစ်လူသိများ Ibutamoren Mesylate (MK163,191) အမှုန့် ..
စွမ်းဆောင်ရည်: 1249kg / လ
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့်ဟာ endogenous ဟော်မုန်း ghrelin ၏ GH လှုံ့ဆော်အရေးယူန်းမှာတစ်အစွမ်းထက်, နှုတ်တက်ကြွစွာကြီးထွားဟော်မုန်း secretagogue အဖြစ်ပြုမူသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ၏လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ဖို့သရုပ်ပြနှင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းများနှင့် IGF-1 အပါအဝင်အများအပြားဟော်မုန်း၏သွေးရည်ကြည်အဆင့်ဆင့်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးထုတ်လုပ်ပေမယ့် cortisol ပမာဏထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောကြီးထွားဟော်မုန်းချို့တဲ့ကလေးငယ်များသို့မဟုတ်သက်ကြီးရွယ်အိုလူကြီးများနှင့်လူ့လေ့လာမှုများ၌ရှိသကဲ့သို့, ဤဟော်မုန်းလျှော့အဆင့်ဆင့်များအတွက်အလားအလာကုသမှုပြုလုပ်ကြွက်သားထုထည်နှင့်အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆနှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးမြှင့်ပြသကြပါပြီအဖြစ်၎င်းသည်များအတွက်အလားအလာကုထုံးအောင်, ဖွံ့ဖြိုးရေးအောက်မှာလောလောဆယ်တွင် သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်ခြို့တဲ့၏ဆက်ဆံမှု။ MK-677 အမှုန့်ကိုလည်းခန္ဓာကိုယ်အဆီဇီဝြဖစ်ပွောငျးလဲဒါအဝလွန်ခြင်း၏ကုသမှုအတွက်လျှောက်လွှာရှိနိုင်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့်
ဓာတုအမည် MK-677;2-Amino-N-[(1R)-2-[1,2-dihydro-1-(methylsulfonyl)spiro[3H-indole-3,4′-piperidin]-1′-yl]-2-oxo-1-[(phenylmethoxy)methyl]ethyl]-2-methylpropanamide methanesulfonate;
အမှတ်တံဆိပ် NAmE Ibutamoren Mesylate (MK677)
မူးယစ်ဆေးအတန်းအစား MK677 အမှုန့်
CAS အရေအတွက် 159752-10-0
InChIKey DUGMCDWNXXFHDE-VZYDHVRKSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C27H36N4O5S.CH4O3S
မော်လီကျူး Wရှစ် 624.768 g / mol
အရည်ပျော်မှတ် 161ºCမှ 315
ချက်ပြုတ်ing Point 868.9 mmhg မှာက c ° 760
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 4-6 နာရီ
Solubility H2O: soluble5mg / mL, ရှင်းလင်းသော
Ibutamoren Mesylate Application အချက်တစ်ချက်လွှတ်ကြီးထွားဟော်မုန်း; ခန္ဓာကိုယ်အဆီဇီဝြဖစ်ပွောငျးလဲ; ကြွက်သားထုထည်နှင့်အရိုးဓာတ်သတ္တုသိပ်သည်းဆနှစ်ဦးစလုံးကိုတိုးမြှင့်; ခန္ဓာကိုယ်အဆီအတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းဇီဝြဖစ်
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) ဖျေါပွခကျြ
(စ ibutamoren သို့မဟုတ် MK677 အဖြစ်လူသိများ) Ibutamoren mesylate, ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအားပေးအားမြှောက်များနှင့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက် 1 (IGF-1) တိုးပွားစေပါသည်။
Ibutamoren mesylate ဟော်မုန်း ghrelin ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုန်းမှာများနှင့်ဦးနှောက်အတွက် ghrelin receptors (GHSR) ၏တဦးတည်းမှ binding အားဖြင့်ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးပွားစေပါသည်။ activated GHSR ဦးနှောက်ကနေကြီးထွားဟော်မုန်းလွှတ်ပေးရန်လှုံ့ဆော်။
GHSR အစာစားချင်စိတ်, အပျော်အပါး, ခံစားချက်, ဇီဝဗေဒ rhythms, မှတ်ဉာဏ်နှင့်သိမှတ်ခံစားမှုထိန်းချုပ်ဦးနှောက်ဒေသများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သ ibutamoren mesylate လည်းဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ နှင့် ghrelin, ibutamoren mesylate တိုးကလိုပဲမျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း - သို့သော်ယခုအချိန်အထိ, လက်တွေ့လေ့လာမှုများကိုသာသက်ရောက်မှု ibutamoren mesylate အစာစားချင်စိတ်ပေါ်ရှိပါတယ်ဖော်ပြရန်။
ibutamoren mesylate အကြောင်းကိုတစ်ဦးကအကြီးအရာကထိုကဲ့သို့သော cortisol ကဲ့သို့သောအခြားဟော်မုန်းအတွက်အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမတိုးနဲ့အတူကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတိုးပွါးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ cortisol ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကဖိနှိပ်, အနာရောဂါငြိမ်းစရာအနာများနှင့်ချို့ယွင်းသင်ယူခြင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဒီဟော်မုန်းတိုးမြှင်ရှိသည်များသောအားဖြင့်မကောင်းမင့်လျော့ကျစေပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှု၏ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) ယန္တရား
(စ ibutamoren သို့မဟုတ် MK-677 အဖြစ်လူသိများ) Ibutamoren mesylate, ကြီးထွားဟော်မုန်း (GH) ၏လျှို့ဝှက်ချက်များကိုအားပေးအားမြှောက်များနှင့်အင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောစီးပွားရေးတိုးတက်မှုအချက် 1 (IGF-1) တိုးပွားစေပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
♦ MK677 အရိုးသိပ်သည်းဆနှင့်အတူကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
♦ MK677 ကြွက်သားကြီးထွားမှုတိုးပှားကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
♦ MK677 ကြွက်သားစွန့်ပစ် Decrease ကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
♦ MK677 အိပ်စက်ခြင်းနှင့်အတူကိုကူညီပါနိုင်ပါစေ
♦ MK 677 အို၏သက်ရောက်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပါစေ
♦ MK677 ဟာဦးနှောက်အပေါ် Nootropic သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါစေ
အကြံပြုကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) သောက်သုံးသော
သုတေသနအပေါ်အခြေခံပြီး, 20mg မှ 30 အရှိဆုံးအကောင်းဆုံးသောက်သုံးသောဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ အဲဒီမှာတစ်ရက် MK30 ၏ 677mg ထက်ပိုယူပြီးလူများ၏အစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကပိုကောင်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုအတွက်လိုက်လျောခဲ့ပါဘူး။ အဘယ်အရာကို ပို. ပင်အရေးကြီးသောအဆိုပါသောက်သုံးသောထက်ရဲ့သံသရာ၏အရှည်သည်။
ဒါဟာ MK677 အချိန်တစ်ပိုရှည်ကာလအဘို့ကိုယူသင့်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကြီးထွားဟော်မုန်းပမာဏတဖြည်းဖြည်းသင်ဆိုးကျိုးများခံစား start မတိုင်မီရက်သတ္တပတ်အတော်ကြာအထိကြာနိုင်သည့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်တည်ဆောက်ရန်ရှိသည်။
ကုန်ကြမ်း Ibutamoren Mesylate (MK677) အမှုန့် (159752-10-0) ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ
MK677 ယင်း၏အသုံးပြုသူများကစိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်ပေမယ့်အချို့သောလူဦးရေအဘို့အထွက်ကြည့်ဖို့အချို့သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိစေခြင်းငှါအဘို့အလွန်များစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးထုတ်လုပ်မထားပါဘူး။ MK677 ယူပြီးသည့်အခါအင်ဆူလင် Sensitivity ကိုမှအားနည်းချက်နေသောသို့မဟုတ်ဆီးချိုရောဂါရှိသည်သောသူတစ်ဦးချင်းစီအန္တရာယ်မှာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဤအခြေအနေများနှင့်ဆက်စပ်ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်နိုင်သည် MK677 ၏အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်ပါတယ်။ MK677 သုံးပြီးတဲ့အခါယခင်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့လေ့လာမှုကိုရည်ညွှန်းယခင်နှလုံးအခွအေနေသူဟောင်းများကိုတစ်ဦးချင်းစီနှလုံးပျက်ကွက်တဲ့အန္တရာယ်မှာရှိပါတယ်။ မဟုတ်ရင်ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်, အဲဒီမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီဆိုအန္တရာယ်ရှိသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်မထင်ထားဘူး, ဒါပေမယ့်နောက်ထပ်သုတေသနအမြဲကြောင့်စားသုံးသူများအာမခံရန်လိုအပ်ပါသည်။
ကုန်ကြမ်း Unifiram အမှုန့် (272786-64-8)